Maraoka: Soloin’ny Casa Negra Tena Any Amin’ny Oscars · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Janoary 2018 6:51 GMT
Vakio amin'ny teny Français, বাংলা, 繁體中文, 简体中文, Italiano, عربي, English
Nampihetsi-po ny Casa Negra tany Maraoka
Tato anatin'ny taona maromaro dia niroborobo ny orinasa mpamokatra sarimihetsika any Maraoka ; tsy ireo avy any amin'ny firenena hafa ihany no mamokatra sarimihetsika malaza ( Kingdom of Heaven, Black Hawk Down, Babel) ao amin'ilay firenena ao Afrika Avaratra, fa efa miha-mahazo vahana any ivelany ihany koa ireo sarimihetsika vokarina ao an-toerana.
Ambaran'i Zakaria Rmidi, ao amin'ny bilaogy Morocco Times, fa voafidy hisolo tena an'i Maraoka any amin'ny fifaninanana Lokan'ny Academy (Oscar) 2010 ilay sarimihetsika Maraokana vaovao Casa Negra. Ankalazain'i Rmidi ilay horonantsary, hoy izy :
Tantara mahazatra hitarafana ny zava-misy marina any Maraoka miaraka amin'ireo fifanoheran-javatra rehetra hita any ity tantara ity. Manome taratra hazavana ho an'ireo maraokana marobe izay miandrandra zava-misy tsaratsara kokoa, amin'ny fianteherana amin'ny fitenin-jatovon'i Casablanca isanandro isanandro ihany koa ity sarimihetsika ity. Noho izany, dia vitan'i Noureddine Lakhmari, izay nahazo traikefa goavana amin'ny maha-mpanatontosa sady mpitantana ireo mpilalao azy, ny nampankafy kokoa ny fanarahan'ireo mpijery Maroakanina ilay sarimihetsika tany amin'ny trano fandefasana sarimihetsika, noho ny fandikàna ireo dika nojirihina, sady nasongadiny fa voasariky ny sarimihetsika izay miresaka ny olany ireo maraokana mpijery sarimihetsika .
Ny soratr’ ilay mpitoraka bilaogy Agharass, izay tsy dia liana loatra amin'ilay sarimihetsika :
Tsy dia tiako loatra ny manimba/mandrava, na manakiana/manaratsy ny asa kanton'ny hafa. Amin'ny fananako, izaho manokana, toe-panahinà mpanakanto, dia tiako foana ny mamela ny mpijery hitsara. Fa haningana kely aho amin'ity indray mandeha ity, ary hilaza fa tsy misy ifandraisany loatra amin'i Maraoka ity sarimihetsika ity, afa-tsy ny toerana mazava ho azy. Ny fomba manokana nanaovana ity sarimihetsika ity/ ny fizotry ny famokarana ity sarimihetsika ity – ho anà sarimihetsika izay lazaina fa Maroakanina- no endriky ny Casa Negra mahatonga azy hampitolagaga, indrindra fa ho ahy. Ny tanora maroakanina izay mikaroka ny fomba rehetra hahombiazana no asehon'ilay sarimihetsika ( na amin'ny fitenin'ny mpamorona : ny lahatsary manontolo sy ny fitsinjarana isam-peo). Zavatra iainan'ireo fiarahamonina rehetra miaina fiovàna [sosialy] ary mety ho hahitàna / hitsenàna / hisedràna [ endrika] ” fanasongadinan-tena amin'ny endrika niandohany”. Maneho an'i Casablanca maintin'ny fiteny tsy maoty / tsy mendrika, sehatry ny herisetra sy trangan-javatra tsy mahazatra ho an'ny ankamaroan'ny mponina an-tanàndehibe ilay sarimihetsika. Tsy hoe satria misy ireo adala sasany miaina ivelan'ny fiarahamonina dia ho ampy izay hanamarinana ny fanaovana safobemantsina ny traikefa / ny fiangaly fiaina ho an'ireo sisa amin'ny fiarahamonina Maraokana.
Tantaranà mpisoloky kely anankiroa miezaka mandositra an'i Casablanca, ilay sarimihetsika. Efa nahazo loka tamina fetiben'ny sarimihetsika maro ilay sarimihetsika faharoa an'ilay mpanatontosa Nour-Eddine.
Hassan Masiky, mitoraka bilaogy ao amin'ny sehatra fifanakalozan-kevitra maraokanina-amerikana “Viewpoints”, nijery ilay sarimihetsika, nilaza izany ho “vatosoa marina” ary nanoratra :
Ny tena endriky ny fiainan'ireo tanora maraokana maro ataon'ny fiarahamonina an-kilabao, tsy noho ny safidiny fa noho ny toe-javatra tsy miankina amin'ny sitrapony no fotokevitra arahin'ny tantara ao anatin'ilay sarimihetsika. Nanome fahombiazana miavaka ireo olona anankiroa nolalaovina, Adil sy Karim, tamin'ny fampisehoany ny hetaheta, hadisoam-panantenana ary ny fanantenan'ireo tanora indray mihira any Maraoka izay eo andalam-pahakiviana sy very fanantenana.
Mitantara ireo karazana olana ara-tsosialy mampiady hevitra ao anatin'ny fiainana andavanandron'ny maraokana izay tsy mbola niadiana hevitra marina sy malalaka teny amin'ireo sehatra fifampiresahana mahazatra mihitsy ny Casanegra. Manomboka amin'ny fibobohana alikaola sy ny fampiasàna zava-mahadomelina ka hatramin'ny fanaovana herisetra an-tokatrano sy ny fanararaotana ara-tsosialy, dia tsy nisalasala i Nour-Eddine niresaka ny maharary ny ara-tsosialy tamin'ny alàlan'ny kanto sy ny sarimihetsika.
Allal El Alaoui, izay mitoraka bilaogy ny momba ilay sarimihetsika any Maraoka, dia nandinika ilay sarimihetsika ihany koa tamin'ny volana May ary hoy izy tao anaty “taratasy iray misokatra” ho an'ilay mpanatontosa :
Zavatra iray ihany koa no fantatro : hankahala ny tenany ireo mpijery maraokana noho ny fiangalim-piteny tsy maoty nampiasainao ao anatin'ny ampahany amin'ny sarimihetsikao. Saingy, heveriko fa toy ny “mpialoha làlana” ny fiangalinao satria fitenin-jatovo eny an-dàlambe tahaka izany no efa hitanay tany ho any amin'ny telopolo na efapolo taona lasa, tany amin'ny trano fandefasana sarimihetsika maraokana tamin'ny alàlan'ireo sarimihetsika eoropeana sy amerikana. Hampiasain'ireo mpilalao sarimihetsika maraokana tsikelikely izany fiteny izany. Manome toky anareo aho fa ho avy tsy ho ela izany. Fa ‘ndeha hiverina amin'ny Casanegra ary hijery ny tenantsika amin'ny alàlan'ity tantara mahafinaritra nosoratan'i Nour-Eddine Ikhmari ity.
Nanaiky ilay mpaneho hevitra, Mohamed Zefzaf ary nanoratra :
Miombon-kevitra aminao sy amin'ny fanombananao ilay sarimihetsika aho. Fa na eo aza ny ‘tsy fahamaotinana”, izahay maraokana dia tsy zatra mampiasa izany ao anatin'ny kanto. Mety maherihery kokoa noho ny ao amin'ilay horonantsary ny tena zava-misy marina – indrindra amin'ny resaka fiteny ampiasaina. Heveriko fa miresaka ny fepetra maha-olona ilay sarimihetsika, izay tsy ho an'ny maraokana irery ihany, fa indrindra maneran-tany… Eritreritra Ihany Izany.
Manana blog [FR], pejy Facebook ary tranonkala ôfisialy ny Casa Negra, izay tsy mbola nivoaka niaraka tamin'ny dikateny anglisy. Raha te-hahafantatra bebe kokoa ny momba ny orinasa maraokana mpamokatra sarimihetsika, vakio ny boky vaovaon'i Sandra Gayle Carter : What Moroccan Cinema?(Ahoana ny amin'ny sarimihetsika maraokana) : Fanadihadiana Ara-tantara sy Tsikera..